शिशिर वैद्य - नेपाल
शिशिर वैद्यका लेखहरु
पिम्बहाः पुखुको सौन्दर्य र चर्चा सुन्न जति आनन्द आउँछ, यसको संरक्षणमा परेको मिहिनेत र कष्ट निकै नरमाइलो छ । थुप्रै मानिसको श्रम, विवेक, समय खर्चिएपछि बल्ल पोखरीले यो रूप प्राप्त गरेको छ । पटक-पटक गरी करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहको गिद्दे नजरबाट बच्दै/बचाउँदै पोखरी अहिलेको रूपमा आएको छ ।
शिशिर वैद्य, फाल्गुन २६, २०७५
यो समस्या नेपाल भाषा बोल्नेको मात्र होइन, तामाङ, गुरुङ, मगर, थारु आदि थुप्रै अन्य मातृभाषा बोल्नेहरूको पनि हो । भाषा र संस्कृति बाँचे मात्रै कुनै पनि जातिको अस्तित्व रहन्छ ।
शिशिर वैद्य, माघ ३, २०७५
साहित्यिक पत्रिकाको शून्यता
बिलाए पाठक र जनताबीच सम्बन्ध जोड्ने खुराक
शिशिर वैद्य, पुस ९, २०७५
खोइ, सचेत­ नयाँ पुस्ता ?
जब युवा वर्गमा हरपल रोजगारीको चिन्ता हुन्छ, जहाँ हरक्षेत्रमा राजनीतिक पहुँच हावी हुन्छ । त्यहाँ आलोचना, सिर्जना, चिन्तन, नीति, नियमजस्ता कुराको अर्थ हुँदैन ।
शिशिर वैद्य, मंसिर ६, २०७५
विद्यार्थीलाई किन चाहियो युनिफर्म ?
निजी बोर्डिङ स्कुलहरूले शैक्षिक प्रतिस्पर्धाका नाममा विद्यार्थीलाई थरीथरीका पोसाक लाद्ने, अतिरिक्त क्रियाकलाप देखाएर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थोपरिरहेका छन् ।
शिशिर वैद्य, चैत्र १५, २०७४
फास्टट्रयाकका लागि परिवर्तित कानुनले निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा हुन्छन् भने त्यही कानुन र त्यस कानुनबाट बनेको संरचनालाई नै नयाँ नेपाल र नवनिर्माणका लागि अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देशक कानुन मान्न सकिन्छ।
गोपाल गुरुङ, शिशिर वैद्यभाद्र १८, २०७२